NCS ရှက်ဖီးလူမှုလှုပ်ရှားမှုနေ့ - Meraki ပွဲတော်တွင် - Element ကို Society က
NCS ရှက်ဖီးလူမှုလှုပ်ရှားမှုနေ့ - Meraki ပွဲတော်တွင်
ဧပြီလ 17, 2018
လူမှုရေးများအတွက်လှုပ်ရှားမှုနေ့မတ်လ 17th 2018 လူငယ်ဘုတ်အဖွဲ့ '' Meraki ပွဲတော်တွင် '' ပေါ်တွင်တင်မှ ရွေးချယ်. , မွို့၌ယဉ်ကျေးမှု၏မတူကွဲပြားမှုဖော်ကျူးဖို့အသိုင်းအဝိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအစားအစာနှင့်ဂီတပွဲတော်။ အဆိုပါနေ့က Ghanian ဖို့ဒျအင်္ဂလိပ်ထံမှအထိကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများက homemade ခဲ့အစားအစာပါဝင်သည်။ ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်နှင့်စတိုးကနေအစားအစာ၏အလှူငွေများလည်းရှိခဲ့သည်။ အားလုံးဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲရှက်ဖီးအတွက်လူငယ်များကပေးအပ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ထိုအဖြစ်အပျက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဘုတ်အဖွဲ့, Tashinga Matewe ၏ဥက္ကဌတို့ကတည်ခင်းဧည်ခဲ့သည်။
ငါနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သူတို့ရဲ့စည်းရုံးရေးအားဖြင့်အထင်ကြီးသည်ဟုဆိုမှသူတို့ကိုတရားသဖြင့်စီရင်မလုပ်ဆောင်ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းများနေ့အဘို့ပြင်ဆင်ကြီးကြပ်နေတုန်း, ဖြစ်ရပ်ကိုယ်တိုင်ကထိုလူငယ်ကလုံးဝကို run ခဲ့သည်။ ဒါဟာနေရာရဲ့သင့်လျော်သေချာစေရန် site တစ်ခုအလည်အပတ်ထွက်တင်ဆောင်လာသောအဆိုပါလူငယ်ဘုတ်အဖွဲ့အချို့ကိုထည့်သွင်း, အကောင့်သို့အစားအသောက်လိုအပ်ချက် ယူ. အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်နှင့်နေ့၏ပြေး၏အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုတက်ဆွဲငင်။
Nabeela Mowlana - NCS ဘွဲ့လွန်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအရာရှိ